Ho aiza marina moa ny Barea? | Mon Gasikara à moi : politique et développement
← Fa maninona no ilaina ny trano mora?
La limite cognitive des politiciens →
Vita iny ny FIKIA 2019 na Fifaninanana Kitra Iraisampirenena eto Afrika 2019 (Afcon e!) ary dia faly daholo isika tamin’ny dia vitan’ny Barea satria tsy nitsanga-menatra ny boay kely ary nampientanentana mihitsy aza. Fa rehefa afaka ny fifaliana dia mametra-panontaniana satria mahalasa saina ihany hoe, mety azo averina ve ireny vita ireny? Tahaky ny ahoana ny ho tohiny manaraka eo? Ny mpilalaontsika mantsy sady efa zokinjokiny daholo no tsy misy mijanona eto, fa izay manan-talenta dia mila ravinahitra any ivelany daholo. Dia ahoana no mba ampandrosoana ny tanindrazana sy izay mijanona eto an-toerana raha izany? Dia ahoana no fomba ahitàna vola iantohana ny tariky ny firenena, raha ny fampidiram-bola rehetra any ivelany, afa tsy ny fivarotana akanjo sy fanaovana dokam-barotra miantehatra amin’ny sitrapon’ny orinasa tsy miankina?
Tsy sanatria miana-kendry ka andeha ampianatra ny efa mahay, fa manao fampitahàna tsotsotra aho eto mba ampitomboina ny hevitr’ireo izay andray andraikitra.
Ony Ramarijaona, gasy miofana ho mpampianatra PGA
Andeha isika haka ohatra tsy lavitra fa etsy ampita kely etsy, ao Afrika Atsimo. In-droa ohatry ny haben’i Gasikara izy, ary avo roa heny koa ny isan’ny mponina. Fa raha resaka golf dia anisan’ny firenena sangany eran-tany ny afrikanina tatsimo. Ankehitriny, dia miisa 7 ny mpilalao avy ao aminy no miady ho voalohany ao Portrush amin’ny The Open, izay fifaninanana farany amin’ny atao hoe « Major », na ny efatra lehibe indrindra eran-tany isan-taona, amin’ny fifaninanana golf.
Ahoana no nahatongavany tamin’izany? Efatra no antony lehibe indrindra hitako.
1. Manana songery avo lenta izy ireo atao hoe « Sunshine Tour », ary misy fifaninanana 34 isan-taona izy io. Efa mihitatra kely eran’ny Afrika moa izy ankehitriny, fa tao Afrika Atsimo no niantombohany, ary mbola ao ny ankamaroan’ny fifaninanana. Anisan’ny 6 avo lenta indrindra eran-tany izy io, nefa dia « moramora » ho an’ny mpilalao ao an-toerana manana ny fari-pahaizana, ny mandray anjara aminy. Kitro iray lehibe amin’ny fampandrosoana ny taranja iray ao amin’ny firenena iray, ny fisian’ny songery sy fifaninanana iraisam-pirenena, na avo lenta. Hatramin’izao dia tsy mitsahatra mamoaka mpilalao matihanina avo lenta io firenena io.
2. Aorina eo ambony tantara ny ho avy. Tamin’ny taona 1949, no nandrenesana voalohany izany Bobby Locke izany. Sangany eran-tany sy nalaza tokoa satria nahazo ny British Open in’efatra ity ranamana. Ry Gary Player tato aoriana nanaraka ary efa nahazo Major 9 !! Avy eo ry Nick Price sy Ernie Els efa loha-laharana eran-tany! Ny fisian’ireo zoky fanta-daza mitarika dia ohatra ho an’ny zandry, ka dia tsy misy tanjona hafa tsy ny ho loha-laharana eran-tany izany ho azy ireo no fetra, fa tsy hoe ho tompondakan’Avaradrano akory na ahazo omby mifaha mahia kozatra.
3. Maro ny fampianarana sy fanofanana mpilalao ao Afrika Atsimo, ary manaraka ny fenitra PGA ambony indrindra misy hatrany, any ka mahasintona mpianatra matihanina sy pitea (amateur) eran-tany. Ambonin’izany, manjary betsaka koa ny tanora no manadrana ho matihanina amin’io taranja io any aminy.
4. Noho ireo antony telo voalaza ireo dia sehatra ara toe-karena matanjaka ny golf ao Afrika Atsimo, satria mahasintona olona maro sy mpanjifa maro. Hany ka maro koa ny mpanambola manao fanamby mamatsy mpilalao, eny fa na avy any ivelany aza mamatsy ireo tanora sangany ao Afrika Atsimo.
Rehefa tsara tantana ireo sehatra efatra ireo, fa tsy misy kitrano an-trano, dia manjaka ny fifaninanana ka ny sangany indrindra foana no mivoaka ary mamiratra eran-tany sy mitarika ny ambony hafa. Ny fanontaniako izany dia hoe :
– firy ny songery misy eto amintsika mba hifaninanan’ny mpilalao, na ny matianina na ny pitea?
– Natao aiza ireo sangany teto amintsika tamin’ny resaka kitra, tokony nalaina tahaka?
– Firy ny toerana fampianarana misy manara-penitra, ka manintona mpianatra?
Afrika Atsimo no ohatra noraisina fa azo natao koa hoe Korea Atsimo raha ny ampela no raisina ohatra amin’ny golf.
Gararo iresahana golf iny fa ny fanatanjahan-tena rehetra dia torak’izany daholo, na hazakazaka, na tennis, na inona na inona.
Galerie | Cet article, publié dans Sport, est tagué Afrika Atsimo, Barea, Golf, Kitra, Pitea, Songery. Ajoutez ce permalien à vos favoris.